संसदमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष कुइनो ठेलाठेल :: Setopati
संसदमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष कुइनो ठेलाठेल सभामुखले माफी नमागेसम्म बैठक अघि बढाउन सक्नुहुन्न: कांग्रेस, प्रतिपक्षको गैरसंसदीय रवैया: नेकपा
मनोज सत्याल काठमाडौं, माघ ८
प्रतिपक्षीको अवरोधका बाबजुद चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबर्जस्ती पारित गराउन खोजेपछि प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कुइनो ठेलाठेलको स्थितिमा पुगेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मंगलबार पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको अस्पताललाई केन्द्र मातहत राख्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो। सोमबार पनि यही माग राखेर संसद अवरूद्ध गरेको कांग्रेसले मंगलबार एक कदम बढेर बैठकको सुरुआतमै वेल घेराउ गर्‍यो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले दुई कोइरालाका नाममा स्थापना हुन लागेको अस्पतालबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै संसद अघि बढाउन खोजे। उनले आफ्नो आसनबाट ‘म बाँकी कार्यभार अघि बढाउँछु’ भनेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले ताली बजाए। कांग्रेस सांसदहरू भने नाराबाजीमा लागे। उनीहरूले संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोल्न प्रयोग गर्ने रोष्ट्रममा जाने बाटो बन्द गरे।
वेल (सभामुखको अगाडिको खाली स्थान) घेराउ गर्न पुगेका कांग्रेस सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभाका मर्यादापालकहरूले बीचमै रोक्ने प्रयास गरेका थिए। तर, उनीहरूको केही सीप चलेन।
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले वेलको बीचमै रोक्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाए। कांग्रेस सांसदहरू आक्रोशित भएपछि महराले संसद बैठक १५ मिनेट स्थगित गरेका थिए।
जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसद्वारा सभामुखलाई आसनमै पुग्न रोक
पन्ध्र मिनेटलाई स्थगित बैठक आधा घन्टापछि मात्र सुरु भयो। त्यति बेला पनि सभामुख महराले 'संसद बैठकको कारबाही सुरु हुन्छ' भनेर उद्घोष गर्नुअघि नै कांग्रेस सांसदहरू वेलमा पुगे। उनीहरूले रोष्ट्रममा जाने बाटो बन्द गरे।
कांग्रेसको अवरोधका बाबजुद सभामुख महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्न अनुमति दिए।
त्यसपछि पोखरेल अवरोध छल्दै सत्तापक्षका सांसदहरूको सिटको बीचबाटै रोष्ट्रमतर्फ अघि बढे। रोष्ट्रममा जान पाँचवटा सिँढी चढ्नुपर्छ। मन्त्री पोखरेल त्यति पनि चढ्न सकेनन्। मर्यादापालकले पोखरेललाई रोष्ट्रमतिर तान्ने प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूले पोखरेललाई अघि बढ्नै दिएनन्।
उनलाई अवरोधबाट फुत्काएर रोष्ट्रममा पुर्याउन नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र उनको पछिपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी लागे। यति गर्दा पनि पोखरेलले अवरोध छिचोल्न सकेनन्। बरु बीचमै पेलिए।
यो घम्साघम्सीबीच शिक्षामन्त्री पोखरेल विधेयक पेस गर्न असफल भए। उनले आफूलाई ‘कांग्रेस सांसदहरूले कुइनाले घचेटेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सभामुख महराले त्यसपछि संसद बैठक दोस्रोपटक पन्ध्र मिनेट स्थगित गरे। तेस्रो बैठक भने सूचनामार्फत् स्थगित गरियो।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसले सभामुख महरामाथि निसाना साँधेको छ। महराले माफी माग्नुपर्ने उसको अडान छ।
‘संसदीय परम्परा, विधि र मर्यादा लत्याएर सभामुखबाट सरकारको निर्देशनमा मर्यादापालकहरूलाई सांसदविरुद्ध प्रयोग गर्ने काम भयो,’ बैठकपछि कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘प्रतिपक्षी सांसद उठिरहेका बेला जबर्जस्ती संसद बैठक चलाउने प्रयत्न गरियो। सदनमा पहिलोपटक होला, प्रतिपक्षले वेल घेराउ गर्दागर्दै संसदको सल्लाहमा सत्तापक्षका सांसदहरू सहभागी भए।‘
संसद सचिवालयका कर्मचारीले सत्तापक्षका सांसदसँग 'एसएमएस' मार्फत् बैठक सञ्चालनको स्वीकृति लिएको उनले दाबी गरे।
‘सभामुखलाई खोज्न हामी कोठामा जाँदा मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा लगेर राख्ने काम भयो। त्यही भएर हामी सभामुखको कोठामा गएर धर्ना बसेका हौं। सभामुखले संसद र प्रतिपक्षको मर्यादा राख्नुभएन। सत्तापक्ष पनि उभिएर पूर्ण बैठक नै डिसअर्डर भएको बेला सदन चल्छ,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘सरकारले जबर्जस्ती विधेयक पारित गराउन खोज्दा पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो भएर सदन चलाउने प्रपञ्चमा सभामुख आफैं संलग्न हुने?’
संसदमा यस्ता घटना भए पनि सभामुख महराले ‘एउटा दलप्रति रुझान राखेर व्यवहार गरेको’ थापाले आरोप लगाए।
‘यसलाई हामीलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिएका छैनौं, यसको प्रतिरोध कांग्रेसले संसद र सडकबाट पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखले ११ गते बैठक राख्ने भन्नुभएको छ। त्यसअघि कांग्रेससँग बसेर हाम्रो चित्त बुझ्ने गरी क्षमायाचना गर्ने, आजको गल्ती स्वीकार्ने र आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने सुनिश्चितता नगरेसम्म अब सदनको कारबाही सभामुखले चाहेर पनि अघि बढाउन सक्नुहुन्न।'
थापाले अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा विधेयक दुवै विषयमा संसदमा अवरोध गरिएको बताए।
‘यो दुई नेताका नामको अस्पतालको विषय मात्र होइन, कांग्रेसको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने कुरा हो,’ थापाले भने, ‘दुईतिहाइको सरकारले कसैलाई बाँकी नराख्ने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई उभिन नदिने हो भने अब कसैले पनि उभिन पाउँछु भन्ने भ्रम नराखे हुन्छ। दुई अस्पतालको निर्णयले प्रतिपक्षीहरूलाई पेल्ने काम सुरु भएको संकेत गरेको छ।‘
सांसद थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषय भने संसदमा आउनै बाँकी रहेको बताए।
‘विधेयकका सन्दर्भमा सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पोजिसन हो,’ थापाले भने, ‘यसका लागि जस्तो लडाँइ लड्न परे पनि हामी लड्छौं।'
नेकपाले भने संसदमा विधिपूर्वक आएको विधेयक रोक्न कांग्रेसले 'गैरसंसदीय दुस्साहस' गरेको आरोप लगाएको छ।
‘कांग्रेसले सभामुखलाई मुख मात्र छाडेन, घेर्ने काम पनि गर्‍यो,’ नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘कांग्रेस अब कुनै पनि संसदको मर्यादा मान्दैन भनेर पहिलोपटक भन्नुपर्‍यो।‘
उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा स्थापना हुने भनिएको श्वासप्रश्वास केन्द्र पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला राखिएको बताए।
‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएका बेला पोखरा विश्वविद्यालय मातहत लैजानुपर्छ भनेर निर्णय भएको छ, म पनि त्यो सिनेटमा थिएँ’ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘मेडिकल कलेज बनाउने हो भने छलफल गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा रोक्नुभयो।'
उनले २०७४ साउन ३२ गतेको सिनेटको निर्णयमा अस्पतालबारे उल्लेख भएको दाबी गरे। चिकित्सा शिक्षा विधेयक भने नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढाउने उनले बताए।
डा. गोविन्द केसी अनसनमा रहँदा र सम्झौतामा भएका कतिपय विषय नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन भइरहँदा किन विधेयक अघि बढाउन हतारो? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले भने, ‘हतारो होइन। उहाँहरूले गोविन्द केसीलाई अनसन बसालेको प्रमाणित भयो। गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि हामीले नाइटभिजन हेलिकप्टर पठाएर काठमाडौं ल्यायौं। तर, कांग्रेस एजेन्डाविहीन भएर त्यो खेती गर्दै छ।'
उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक किन रोक्नुपर्ने भन्दै प्रतिप्रश्नसमेत गरे।
‘उहाँहरूले यो विधेयक रोक्ने कसम खानुभएको छ। किनभने, गोविन्द केसी संविधान 'डिटोरेट' गर्ने र त्यो बेलाका जघन्य अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर 'डिस्कोर्स' बदल्न खोज्दै हुनुहुन्छ,' अधिकारीले भने, 'कांग्रेस त्यसैको मसिहा बनेको हो?’
शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने संसदीय समितिमा सहमति गर्ने कोशिस भए पनि असफल भएको बताए।
‘संसदमा आइसकेपछि अब मन्त्रीले यताउता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘डाक्टर केसीसँगको सहमतिअनुरुप नै विधेयक छ।' उनले विधेयक निर्माण क्रममा अहिलेसम्म भएकामध्ये अधिकतम सहमति समावेश गरिएको दाबी गरे।
‘विधेयकले चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न आयोग बनाउने भनेको छ। वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। मैले ऐन बनाएर आयोगले काम सुरु गरोस् र प्रणालीमा ल्याउँ भनेको छु,’ पोखरेलले भने, ‘समितिमा आएपछि मैले अगाडि बढाउनैपर्छ। सरकारको तर्फबाट यसलाई अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौं।‘
पोखरेलले आफूलाई संसद बैठकमा कुइनोले घचेट्ने काम भएको पनि बताए।
‘प्रतिपक्षबाट जुन ढंगले व्यवहार भयो, कुइनाले मन्त्रीलाई जान नदिने प्रवृत्ति देखाइयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई कुइनोले घोच्ने?' विगतमा आफूले प्रमुख सचेतक भएर काम गरेको भन्दै संसदीय प्रक्रिया पालना गर्ने उनले बताए।
'अहिले व्यक्तिको कुरा भन्दिनँ, तर जुन ढंगको शैली देखाउनुभयो त्यो सही होइन। अझ सभामुखलाई आफ्नो च्याम्बरबाट हाउसमा जान नदिने काम अहिलेसम्म भएकै थिएन। यो गैरसंसदीय रवैया भएन?’ पोखरेलले भने, ‘आफ्नो कुरा पास भएन भन्दैमा अल्पमतले विधिद्वारा जानुपर्दैन?’
मन्त्री पोखरेलले डा. केसीको अनसन चिकित्सा शिक्षाका विषयमा मात्र केन्द्रित नरहेको आरोप लगाए।
यसअघिको सहमतिअनुसार बरु नयाँ विषय थपेर विधेयक ल्याइएको पोखरेलले उल्लेख गरे। ‘सरकारका तर्फबाट अब जहिले हाउस बस्छ, म विधेयक अघि बढाउन प्रतिबद्ध छु,’ उनले भने।
संसदको अर्को बैठक ११ गते १ बजे डाकिएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ८, २०७५, १०:५३:००